Guryaha miyiga ee Galicia | Wararka Safarka
Guryaha miyiga ah ee ku yaal Galicia, talooyinka iyo fikradaha la joogayo
Susana Garcia | | Guryaha, Talooyin, General
El dalxiiska miyiga Galicia ayaa sii kordhayaMaaha wax aan micno lahayn waxaan ku dhex jirnaa bulsho leh dhul miyi ah oo aad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan dhul qurxoon iyo dhaqammo aan dhammaad lahayn. Taasi waa sababta ay dad aad u tiro badani u doortaan inay dib ugu noqdaan miyiga Galicia dhawr maalmood, si ay ugu raaxaystaan ​​xasilloonida degaannadan oo ay awood ugu yeeshaan inay la xiriiraan dabeecadda.
Xoogaa waan ku siinaynaa tilmaamaha markaad raadineyso guriga miyiga iyo waliba fikradaha qaarkood ee ku saabsan guryaha miyiga ah ee Galicia oo noqon kara xulasho wanaagsan. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira dalxiis weyn oo reer miyi ah sidaa darteed dhib naguma aha inaan ka helno hoy xarumahan miyiga ah ee guryaha hayaa quruxdooda oo dhan.
1 Talooyin ku saabsan doorashada guriga miyiga
2 Qaar ka mid ah guryaha miyiga ee ugu wanaagsan Galicia
2.2 Cabanas waxay sameeyaan Barranco
2.3 Guriga Miyiga ee Feektarka Fooqaarka ah
2.4 Guriga Miyiga A Fervenza
Talooyin ku saabsan doorashada guriga miyiga
Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad tixgeliso bilowga waa haddii aad rabto gudaha ama xeebta, tan iyo Galicia labadan fursadood ayaa ku habboon. Waxaa jira guryo miyi ah oo u dhow xeebta, si ay ugu raaxaystaan ​​xeebaha cajiibka ah, laakiin kuwa kale ee ku sugan meelaha gudaha ah sida Ourense iyo sidoo kale bixiya muuqaalka cajiibka ah. Marka talaabadan la go'aansado, waa inaan helnaa guriga ku habboon miyiga. Fursadaha kiiskan waa kuwo aan dhammaad lahayn, maaddaama qaar loogu talagalay dalxiis dalxiis, kuwa kale waxay raadiyaan nasasho guud, waxaa jira kuwa loogu talagalay lamaanayaasha iyo kuwa kale ee dalxiiska qoyska. Waa fikrad wanaagsan in laga fiirsado nooca dalxiis ee aan raadineyno si aan u helno guri ku habboon waxa aan dooneyno.
Hal shay oo maskaxda lagu hayo ayaa ah in guryaha qaar ay yaalliin u dhow xarumaha waaweyn ama magaalooyinka laakiin kuwa kale waa kuwo fog. Haddii aan rabno inaan booqano waxyaabo kale ama aan magaalo yeelano meel u dhow, waa inaan sidoo kale xadidnaa guryaha miyiga ah ee la soo xulay. Galicia dhib malahan, maadaama marar badan aan dhowr kiiloomitir u jirno magaalada meelaha miyiga ah iyo meelaha aad u deggan.
Waqtiga buug waa had iyo jeer ka fiican in la sameeyo ka hor, gaar ahaan meelaha aadka loo jecel yahay, sida kuwa ku dhow magaalooyinka sida Santiago de Compostela. Xilliga xagaaga waxaa jira dalxiis aad u tiro badan, laakiin waa inaad marwalba maskaxda ku haysaa in shaqadani ay kordhayso maalmaha fasaxa iyo dhamaadka usbuuca.
Qaar ka mid ah guryaha miyiga ee ugu wanaagsan Galicia
Markaad dooraneyso sidoo kale waxaan ku yeelan karnaa xoogaa dhiirigelin ah. Waxaa jira guryo badan oo miyi ah sidaan dhahno, marka halkan waxaan ku arki doonnaa kaliya qaar leh tixraacyo aad ufiican iyo dib u eegis, laakiin taasi micnaheedu maahan inay iyagu yihiin kuwa kaliya ee mudan.
Waxaan ka bilaabaynaa mid ka mid ah guryaha miyiga ah ee sida caadiga ah sixra oo aad loo hadal hayo. La Quinta de San Amaro wuxuu la mid yahay xarrago iyo tayo, oo ku taal Meaño, oo ku taal wadnaha caanka caanka ah ee Rías Baixas. Aaggan ay ku hareeraysan yihiin beero canab ah ayaa ah meesha ugu haboon ee lagu nasto laguna dhadhaminayo khamriga caanka ah ee leh asalka asalka Guryuhu waxay leeyihiin barkad ballaadhan oo dibedda ah oo fiirisa dooxada, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad booqato inta lagu jiro bilaha xagaaga si looga faa'iideysto joogitaankaaga. Intaas waxaa sii dheer, hoygaani wuxuu badanaa bixiyaa booqasho ku taal khamriga ku yaal Albariño, taas oo ah qiimo weyn oo lagu daray. Guriga caadiga ah ee dhagaxu kama lumiyo soo jiidashadiisa waxaanan ka heli karnaa meelo ay ka mid yihiin barxadda weyn ee dhagaxa weyn iyo maqaayad duug ah oo hore loo dayactiray.
Cabanas waxay sameeyaan Barranco
Sidoo kale oo loo yaqaan Cabañitas del BosqueWaxaan wajaheynaa nooc qurux badan oo guri miyi ah oo bixiya waxyaabo badan oo qarsoodi ah, gaar ahaan loogu talagalay lamaanayaasha doonaya inay isbuuc dhammaadka xasilloonida ku qaataan. Qollo yaryar oo madax bannaan oo ku yaal magaalada Coruña ee magaalada Serra de Outes, oo u dhow xeebaha Muros ee ku teedsan Noia. Waxay bixiyaan adeegyo xiiso leh, sida qaboojiyaha buuxa iyo quraacda waddanka, iyo sidoo kale gelitaanka xayawaanka.
Guriga Miyiga ee Feektarka Fooqaarka ah
Sida magaceedu tilmaamayo, gurigan miyiga ah wuxuu ku yaalaa qadiim hore Galician, guri qurxoon oo dhagax ah oo dib loo soo celiyey laakiin kaas oo la isku dayey inuu ilaaliyo muuqaalka caadiga ah ee had iyo jeer leh dhammaan raaxada hadda jirta. Ku gurigu wuxuu ka soo bilawday qarnigii toddoba iyo tobnaad wuxuuna u taagan yahay munaaraddiisa qalcadda leh. Waxay leedahay jardiinooyin waaweyn oo lagu nasto iyo waliba maqaaxi ay ku adeegaan cunnooyinka ay jecel yihiin ee Galician. Waxay ku taal magaalada O Covelo ee Pontevedra.
Guriga Miyiga A Fervenza
Gurigan miyiga ah ee quruxda badan Waxay ku taal gobolka Lugo, dhawr kiilomitir u jirta magaalada deyrka leh. Waa guri kale oo duug ah laga soo bilaabo qarnigii toddoba iyo tobnaad oo la dayactiray oo ku yaal aag dabiici ah oo aad u deggan. Waxay ku jirtaa keyn la ilaaliyo magaceeduna wuxuu ka yimaadaa biyo-dhaca ku dhow ee la booqan karo, maxaa yeelay Galician 'fervenza' macnaheedu waa biyo-dhaca. Waxay leedahay qaab qurxoon oo waddan leh oo alwaax guriga gudihiisa ah leh. Dibaddeeda waxaa sidoo kale ku yaal barkad lagu dabaasho oo lagu raaxeysan karo inta lagu jiro xagaaga qubays wanaagsan oo ku hareeraysan xasillooni.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Guryaha miyiga ah ee ku yaal Galicia, talooyinka iyo fikradaha la joogayo
Masar oo caruur leh
Lug ku dhex maro Villa Borghese